Intlọ nkwari akụ Corinthia Budapest: Nọrọ ọdụ ma nweta nnukwu ego
Location: Mbido » Ịdee » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Intlọ nkwari akụ Corinthia Budapest: Nọrọ ọdụ ma nweta nnukwu ego
Corinthia Hotel Budapest, otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na Budapest, na-enye ndị ọbịa na-anọ abalị 3 ma ọ bụ karịa nnukwu mbelata ego kacha mma nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Enwere ike ịdebanye nkwekọrịta ahụ dị ka mmalite nke June ma dị maka ịnọ ruo December 27, 2017. ngwugwu ahụ gụnyere ebe obibi maka 2, ịnweta Royal Spa, na WI-FI n'efu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a bụ ọmarịcha ala, yana facade Neo-classical, nnukwu iko atrium nwere akụkọ 6 na spa nke narị afọ nke 19 nke mara mma na-enye ọgwụgwọ ESPA na teknụzụ dị egwu.
Executive eze ime ụlọ
Na mgbakwunye na, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 4 na-adọrọ mmasị ịhọrọ site na. Ndị ọbịa nwere ike ịlele nri ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa na Rickshaw Restaurant, efere ndị na-agba agba na nke modernist na Caviar na Bull, nri mba ụwa na Hungary na Brasserie & Atrium, na ngwakọta nke tapas Spanish na efere Hungary na Bock Bistro. A na-enye menus na Brasserie & Atrium dịka akụkụ nke echiche Farm to Tebụ nri ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-eji nri sitere n'aka ndị na-emepụta ihe na Hungary.
Maka ama ndi ozo, pịa ebe a.
Foto: Spa na Corinthia Hotel Budapest
DBEDT gosipụtara ụlọ ọrụ Hawaii na 2017 BIO International Convention
US inbound tourism bụ nnukwu ihe: ndị 6400 si mba 70 gara IPW na Washington
Ihe ngosi nka nke mba ụwa ewegharala...